Kungani nginqume ukungayithengi i-iPhone 7 | Ngivela kwa-mac
Kungani nginqume ukungayithengi i-iPhone 7
Sekuphele amasonto ambalwa i-Apple yethule isizukulwane esisha se-flagship yayo, i-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus. Kusukela lapho, noma kunalokho njengoba ingene ezitolo ngemuva kwesonto, sikwazile ukuyithinta futhi sayizwa ezandleni zethu. Kwakuwukuhlolwa kwe-litmus okwakuzocacisa ukuthi ngabe uzothenga noma yiziphi izinhlobo ezintsha.
Ekugcineni umbono wami awukashintshi. Kakade ngaphambi kokwethulwa kwayo, ngokususelwa kulwazi olutholakala kuyo, bengicishe ngathatha isinqumo sokuthi bengingazukuyivuselela i-iPhone yami yamanje ye-iPhone entsha 7. Njengasempilweni, isizathu akusiso sodwa. Uma unqikaza ukuthenga noma cha i-Apple smartphone entsha, mhlawumbe umbono wami ngayo ungaba usizo kuwe. Ake sibone ukuthi kungani ngenza lesi sinqumo.
1 I-iPhone 7 ingenza ngibe nethemba lokungcono
1.1 Nosuku lokhiye lwafika
1.2 Ngiyabonga Apple
I-iPhone 7 ingenza ngibe nethemba lokungcono
Lo nyaka we-2016, osuvele ungena esigabeni sokugcina, awusiwo unyaka omuhle we-Apple, kepha angisho ngoba ukuthengisa kwakho kuncishisiwe, cha, kungumbono womuntu uqobo. Okokuqala Ngibona ukuntuleka kwezinto ezintsha, yize kungakacaci ukuthi ngabe kunjalo ngempela yini noma uzama nje ukusithengisela idivayisi maphakathi naleyo oyihlelayo empeleni. Ngokwethembeka, angazi ukuthi iyiphi kulezi zindlela ezimbili ezimbi kakhulu.
Kakade selokhu kwethulwe ama-iPhone 6s wangaphambilini kanye ne-iPhone 6s Plus, saqala ukuzwa amahemuhemu ngokuthi kungaba yini isizukulwane esilandelayo se-Cupertino flagship, i-iPhone 7. Ngokuthakazelisayo, lawa mahemuhemu awazange ahluke kakhulu kulawo esasizwile kuwo wonke umhlaba unyaka owedlule wesizukulwane esithi "S", ngamafuphi: ukwakheka okufanayo nokwenza ngcono ngaphakathi.
Ngasikhathi sinye, unogwaja wesikhumbuzo seminyaka eyi-2017 we-iPhone wayegxuma, ozokhishwa ngonyaka ozayo, ngonyaka we-XNUMX, futhi okusobala ukuthi kungasho ushintsho lwangempela lwedivayisi, into efana ne- "Renaissance of the iPhone."
Nosuku lokhiye lwafika
Ekugcineni, uSepthemba 7 wafika futhi wonke amachibi agcwaliseka: U-Apple usethule isizukulwane esithi "S" esifihlwe njenge-iPhone entsha. Yebo, ngoba empeleni, i-iPhone 7 iyi-iPhone 6s ethuthukisiwe, eneziphetho ezimbalwa ezintsha, isixhumi esisodwa, i-adaptha eyodwa, amazinga athuthukisiwe okumelana nothuli namanzi, i-chip enamandla kakhulu nokunye okunye. Kepha ngiyagcizelela, empeleni, kungukugcina okufanayo. Futhi bheka, angicabangi ukuthi kubi, okungukuthi, ngicabanga ukuthi izinga lokuvuselelwa kwama-smartphones, njengoba kwenzeka nge-iPad, selifinyelele umkhawulo lapho kungekho lutho olungakunikeza khona. Ngalesi sizathu, i-Apple mhlawumbe inweba umjikelezo wokuvuselela kusuka eminyakeni emibili kuya kwemithathu, futhi kubukeka njengesinqumo esihlakaniphile kimi. Okungabonakali kukuhle kimi ukuzama ukukupenda njengento entsha ngokuphelele lapho okuwukuphela kwento ephawuleka ngempela nge-iPhone 7 entsha yikhamera yayo ekabili futhi ngaphezu kwakho konke, kuyisici esikhethekile se-iPhone 7 Plus.
Eqinisweni, Ngicabanga ukuthi ukwethulwa kwe-3D Touch kuma-iPhone 6s bekuyinto entsha yokujula okukhulu kunanoma iyiphi yaleyo ethulwe ku-iPhone 7, futhi lokhu yize iqiniso lokuthi amandla alo akakasetshenziswa ngokugcwele.
Uma sibheka lo mncintiswano, okwenzeke kulo nyaka nge-iPhone 7 akugcini ngokukhethekile ku-Apple; i-Galaxy S7 ayilutho ngaphandle kwenguqulo ethuthukisiwe? we-S6, mhlawumbe ngoba babikezela i- "iPhone 8" emangazayo, futhi bafuna umzuzu ofanele wokuqalisa ukusebenza.
Kunoma yikuphi, i-iPhone 7 entsha ayinginiki izizathu ezanele zokushintsha i-iPhone 6 Plus yami yamanje, okuthi, ngemuva kweminyaka emibili, ihambe kahle, ibengcono kakhulu kunakuqala ngenxa yokuthuthuka kwe iOS 10.
Ngakho-ke, yize ngingathanda ukubona idizayini entsha, isikrini se-OLED, i-iPhone engenamanzi nezinye izinto eziningi, ngisajabule, ngoba okokuqala ngqa selokhu ngangena ku-ecosystem we-apula elilonyiwe, I-Apple ikwazile ukuchitha cishe unyaka ngaphandle kokutshala imali kumikhiqizo yayo. Futhi uma ungenzi lutho ukuluvimbela, omunye unyaka onjengalona uzodlula kuze kuvele i- "iPhone 8" noma ngabe yikuphi ukuphela okulandelayo okubizwa ngakho.
Kube khona okuhlukile kuphela lapho u-AI-pple ikhombisile ukuthi, uma ifuna, iyakwazi ukuqamba nokuletha umncintiswano emadolweni ayo. Lokhu okuhlukile kukuvumele ukuthi usho ukuthi "cishe" unyaka udlulile ngingazange ngitshale imali kumikhiqizo yakho. Kepha leyo enye indaba engizokutshela yona kokuthunyelwe okuzayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Kungani nginqume ukungayithengi i-iPhone 7
I-albhamu kaDrake Views isidlalwe amahlandla ayi-1.000 billion ku-Apple Music kuphela
Ngakho-ke ungabelana ngamafayela usebenzisa uhlelo lokusebenza lwamaNothi ku-MacOS Sierra